Njirimara na ịdị mkpa nke map ọkụ mmetọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Map ndị na-emetọ ọkụ
N'ime ụdị mmetọ dị adị anyị nwere nke a na-apụghị imetụ ma ọ bụ nyochaa. Ọ bụ maka mmetọ ọkụ. Ihe mmetuta a bu ngbanwe nke ogo nke ihe okike nke emeputara site na isi ihe nke ihe ozo. Iji kọwaa ma nyochaa mmetụta mmetọ a nwere n'ebe ndị ọzọ dị ndụ na usoro okike ndị dị ndụ, map mmebi iwu.
N’isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe eserese mmetọ ọkụ na ihe ha na-eme.
1 Kedu ihe bụ mmetọ ọkụ
2 Mmetụta nke mmetọ ìhè
2.1 Ìhè na-agbasasị na mbara igwe
2.2 Ọgba aghara na ntanye
2.3 Mmetụta dị iche iche na ndụ dị iche iche
2.4 Mbibi nke mbara igwe
3 Maapụ nke mmetọ ìhè na mkpa ọ dị
Kedu ihe bụ mmetọ ọkụ
Mmetọ ọkụ nwere ngbanwe ahụ na ọnụọgụ ọkụ nke otu ebe nwere yana nke ahụ adabaghị na ọkụ ọkụ nke ewepụtara. Nke ahụ bụ ịsị, ụmụ mmadụ na-eji ọkụ wuru ewu na-ebi n’abalị n’obodo. Njuputa nke mmepe obodo nke anyi nwere na narị afọ gara aga bụ ihe na-akpata oke ọkụ ọkụ na-emetụta ihe ndị ọzọ dị ndụ na mbara ala.
N’ezie, ị nụtụla mgbe ndị na-enyocha mbara igwe na-ekwu okwu ahụ ikiri ihu igwe n'abali siri ike n'ihi mmetọ a. Anumanu ndi nwere oru nocturnal na-emetuta oria a. Umu anumanu dika Fireflies, bu ndi n’adighi ike n’uwa nile.
Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị ebipụtala map nke mmetọ ìhè sitere na gburugburu ụwa nke na-ekpughe mmetụta nke ọkụ ọkụ aka nwere gburugburu ụwa. Ihe dị ka 83% nke ndị bi n'ụwa na ihe karịrị 99% nke mba ndị mepere emepe bi n'okpuru igwe nke ihe ọkụkụ metọrọ.
N’ebe niile na Europe anyị nwere mmetọ ikuku dị ike nke na ihe karịrị 60% nke ndị bi na ya enweghị ike ịhụ Milky Way. Na mba anyị, anyị nwekwara mmetọ ọkụ dị ukwuu nke na-akpata ihe na-erughị 4% nke ndị bi na mpaghara ebe ọkụ na-anaghị arụ ọrụ.
Mmetụta nke mmetọ ìhè
Anyị ga-enyocha n'okpuru mmetụta dị iche iche na mmetọ ọkụ na-akpata ma ahụike nke ụmụ mmadụ na ihe ndị ọzọ dị ndụ.
Ìhè na-agbasasị na mbara igwe
Ọ bụ ihe ịtụnanya nke na-eme ka ìhè nwuo n'akụkụ niile n'ihi mmekọrịta ha na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ dị n'ikuku na ihe ndị na-emebi ikuku na nkwụsịtụ. Nsonaazụ a bụ ihe anyị nwere ike ịhụ etu ahụkarị ọkụ nke na-ekpuchi obodo na nke a na-ahụ site na narị otu narị kilomita pụọ. Anyị nwekwara ike ịhụ igwe ojii na-enwu gbaa dị ka a ga-asị na ha bụ ọkụ.
Ọgba aghara na ntanye
Nsonye ọkụ na-apụta mgbe ọkụ na-enwu n'otu ụzọ ọ ga-esi wakpo ebe ndị ọzọ gbara ya gburugburu. Nke a na-eme ọtụtụ oge n’obodo mepere emepe ebe ọkụ latrik na-abanye n’ụlọ ndị mmadụ. Nke a na-ebute ọghọm nke ndụ ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na akọwabeghị mmetụta ọ na-enwe n'ahụ mmadụ, amaara ya na-akpata nsogbu ụra.
Glare na-apụta mgbe ndị mmadụ nọ n'okporo ụzọ ọha na eze na mmetụta nke ìhè na-egbochi ma ọ bụ agaghị ekwe omume emit site na nrụnye dị iche iche nke artificial. A na-ahụ nke a n'ụzọ dị ukwuu site n'okporo ụzọ na-enwu ọkụ na-eche na nchekwa okporo ụzọ abawanyela. Agbanyeghị, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-agakarị ngwa ngwa na ngalaba na-enwu gbaa n'ihi na ha nwere ike ịhụ nke ọma.
Mmetụta dị iche iche na ndụ dị iche iche
Ihe ozo ndi ozo di ndu na-emetuta kwa ihe ndi ozo. Umu ahihia na umu anumanu nwere oru ndi ozo di iche na nke na-eme n'ehihie. Ọkụ a na-enweghị isi na oke osimiri bụ mbuso agha nye ndụ mmiri. Dịka ọmụmaatụ, nke a Artificial light agbanwe ịrị elu na ọdịda cycles nke mmiri plankton. Ọ na-emetụtakwa usoro ọmụmụ nke oke mmiri, n'ihi na ọnwa na-eduzi ya ma ọ bụrụ na oriọna ndị dị n'okporo ámá na-agbagwoju anya.
Nnụnụ, maka nke ha, na-enwu gbaa ma na-agbarụ site na ọkụ na-enweghị atụ. Nke a bụ mmetụta na ọtụtụ ụdị na-efunahụ ụzọ ha kpamkpam na ndị ọzọ na-achọ nri ma ọ bụ karịa karịa nkịtị ma na-ejedebe na afọ efu. Mmetụta ndị a niile na-emebi nguzozi n'etiti ndị mmadụ dị iche iche ma na-agbaji. Habitsmụ ahụhụ na-agbanwekwa site n’abalị ndị a na-eme n’abalị na ọkụ bọlb nke na-eme ka ezumike ha na-aga n’abalị ma n’ehihie.
Mbibi nke mbara igwe
Ka anyi ghara ichefu na elu igwe mepere emepe nwere agba ocha na oroma nke n’emebi obodo nile. Anyị enweghị ike ịhụ kpakpando na mbara igwe, ndị a bụ ihe nketa nke ọgbọ niile ma dị mkpa na mbido ọdịbendị na mmepeanya. Nke a na - ebute ịda ogbenye n'ọdịbendị Ebe ọ bụ na ọtụtụ akụkọ ifo ndị jikọtara ha na kpakpando ndị dị na mbara igwe efunahụla, i nwere ike ịmata ọnọdụ ha na oge nke afọ anyị nọ na ya. Naanị ile anya na mbara igwe dị mgbagwoju anya.
Maapụ nke mmetọ ìhè na mkpa ọ dị
Enwere map ndị na-emetọ ọkụ na-egosi mmetụta nke ọkụ a gburugburu ụwa. Ihe na-egosi na map ndị ahụ sitere na Nchikota ihe oyiyi satịlaịtị dị iche iche na ọtụtụ nha. Enwere ike ịhụ ya nke ọma na mpaghara kachasị mebe ebe ọ bụ na ha bụ ebe ebe ọkụ na-agbanye ọkụ. Otu n'ime ụwa na-adọta mmasị dị ukwuu bụ iyi nke dị n'akụkụ osimiri Naịlị ndị a niile bụ obodo mmepe na obodo mepụtara ụzọ ndụ ha n'akụkụ Osimiri Naịl.
A na-eji agba dị iche iche gosipụta ọkwa mmetọ ọkụ dị adị. Ndị na-acha odo odo enweghị ike ịhụ igwe abalị, ebe ndị nọ na mpaghara ọbara ọbara enweghị ike ịhụ Milky Way. Dị ka ụfọdụ ọmụmụ ihe karịrị otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị niile bi n’ụwa enweghị ike ịhụ ụyọkọ kpakpando anyị.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu gbasara eserese mmetọ ọkụ na mmetụta ọ nwere na ụdị dị iche iche nke ụmụ mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Map ndị na-emetọ ọkụ
Jocelyn mgbịrịgba burnell